केहि महिनाअघि उम्लिरहेको तेलमा डुबेका शिशिर अहिले कस्तो भए ? कस्को आँशु नझर्ला यो भिडियो हेर्दा - Kavre Online
केहि महिनाअघि उम्लिरहेको तेलमा डुबेका शिशिर अहिले कस्तो भए ? कस्को आँशु नझर्ला यो भिडियो हेर्दा
यसैबिच चर्चित बाल कलाकार शिशिर बाबुलाई भेट्न गए । उनीसँगै आमा कविता रेग्मी र बाबा अरुण रेग्मी पनि पुगेका थिए । हामीले शिशिर बाबुलाई २ लाख ३६ हजार सहयोग दिँदा अनुभवको परिवारले पनि आफुले सकेको सहयोग गर्नुभयो । त्यसैबिच अनुभव निकै भक्कानिएर रोए ।
Prevपल्सर १२५को दमदार इन्ट्री, यस्तो छ पहिलो महिनाको बिक्री
Nextरिठ्ठे भिरमा ऐना भित्र लुकेको ड*र*लाग्दो रहस्य: रहश्यमय भीरले कसरि निल्यो हजारौ यात्रु ? (हेर्नुस भिडियो)
लामो समयपछि रवि लामिछानेको परिवारसँग मिलन (फोटोफिचर)